प्रिमियर इन्सुरेन्सको एफपीओ बाँडफाँड केहि बेरमै, १ लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताको हात खाली हुने..
February 1, 2018 Aagan Post0Comments
काठमाडौँ । प्रिमियर इन्स्योरेन्सको एफपीओको बाँडफाँड बिहिबार अहिले केहि बेरमै हुने एनएमबी क्यापिटलका प्रमुख व्यवसायी तथा सञ्चालन अधिकृत कमल प्रसाद नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार एनएमबी क्यापिटलको काठमाण्डौ, नक्सालस्थित कार्यालय परिसरमा एफपीओ बाँडफाँडको नतिजा प्रस्तुत गरिनेछ ।
प्रिमियर इन्स्योरेन्सले निश्कासन गरेको ६ लाख ६५ हजार ५ सय ६५ कित्ता एफपीओमा १ लाख ८३ हजार ८ सय ४६ वटा आवेदन परेका थिए । कुल ५२ करोड ६९ लाख ९२ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ बराबरको एफपीओका लागि ३ अर्ब २२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको आवेदन परेको थियो ।
इन्स्योरेन्स कम्पनीले १०० रुपैयाँ फेस भ्यालूमा ६९९ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता ७ सय ९९ रुपैयाँको दरले एफपीओ बिक्री गरेको हो ।
प्रिमियरले पुस १६ देखि छिटोमा पुस १९ र ढिलोमा माघ १५ सम्मका लागि ६ लाख ५९ हजार ५ सय ६५ कित्ता एफपीओ विक्री खुला गरेको थियो । पुस १९ गतेसम्म विक्री खुला रहेको प्रिमियरको एफपीओमा तोकिएकोभन्दा बढी आवेदन परेको छ । एनएमबी क्यापिटलका प्रमुख व्यवसायी तथा सञ्चालन अधिकृत कमल प्रसाद नेपालले प्रिमियरको एफपीओमा १ लाख ८३ हजार ८ सय ४६ जना आवेदकबाट रू. ३ अर्ब २२ करोड ५८ लाख ७१ हजार बराबरको आवेदन परेको जानकारी गराएका थिए ।
आवेदकको सङ्ख्या बढी भएकाले गोलप्रथाबाटै एफपीओ बाँडफाँट हुने नेपालको भनाई रहेको छ । गोलप्रथाद्वारा एफपीओ बाँडफाँट गर्दा अहिलेको नियममा ६५ हजार ९ सय ५६ जना लगानीकर्ताको हातमा १० कित्ता शेयर पर्ने देखिन्छ ।
प्रिमियरले एफपीओ विक्रीका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट मङ्सिर १८ गते स्वीकृति पाएको थियो । यस एफपिओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ३ हजार २ सय ९० कित्ताको लागि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था रहेको थियो । हाल रू. ४४ करोड ८५ लाख ३ हजार ८ सय चुक्तापूँजी रहेको प्रिमियरको एफपिओ बाँडफाँट पश्चात रू. ५१ करोड ४४ लाख ६० हजार ३ सय पुग्नेछ ।
← साधारण शेयर जारी गर्न नपाएको सामुदायिक लघुवित्त बित्तिय संस्थाको आयो प्रेस बिज्ञप्ति..
बुढीगण्डकी आयोजना अघि बढाउन ९४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले दिने, आयोजनाको काम छिटो अघि बढ्ने →
घरमै बसेर C-ASBA प्रणाली मार्फत शेयर आबेदन दिन यसो गर्नुहोस..
आरम्भ माइक्रोफाइनान्स शेयर (आइपीओ) बाँडफाँड , सबैलाई चकित बनायो
March 7, 2018 Aagan Post 0